I-CASA D'ELSA BEDROOM KANYE NETERA YALO ILIBEKE OLWANDLE - I-Airbnb
I-CASA D'ELSA BEDROOM KANYE NETERA YALO ILIBEKE OLWANDLE
Les Trois ilets, i-Martinique
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Elsa
U-Elsa Ungumbungazi ovelele
Indlu inamakamelo ezivakashi angu-4 okuhlanganisa naleli gumbi elihle elithokomele, elibheke olwandle, elikwazi ukufinyelela ngqo endaweni yalo yangasese, isiphephelo-moya esincane esihambayo kanye nendawo yokungena ezimele. Igumbi lokulala lifakwe umbhede onamaphosta amane onenethi lomiyane, umatilasi wegwebu lenkumbulo olashwe izibungu kanye nenhlaba (okusha kusuka ngomhlaka-03/10/2019) kanye nefriji. Ibhulakufesi lakho lokuqala liyanikezwa.
Wonke amanye amagumbi endlu ayahlanganyela kanye nendlu yokugezela. ⚠ izinja namakati.
Igumbi elincane lamathoni e-beige anamafasitela angu-2, 1 anokubukwa kolwandle kanti enye ingadi enomnyango oqondile wethala. Igumbi lokugqoka elingu-1 kanye ne-air conditioning engu-1.
Indlu ivula ithala elikhulu kanye nedamu lalo lokubhukuda, elibheke olwandle kanye nezibani zaseFort de France. Kuleli, itafula elikhulu labantu abangu-8 liyakwamukela ekudleni kwakho kanye nendawo yokuphumula ukuze uphumule noma uphuze !!!
Ikhishi onawo lingaphandle.
Indlu inamanye amagumbi ezivakashi angu-3, elinye lawo elineshawa yase-Italy kanye nesitsha sokugezela, ngalinye linefriji lalo.
Unganikezwa ukudla kwezivakashi.
Kubantu abaqwala izintaba, amashidi ezindaweni ezingama-62 zokuqwala izintaba e-Martinique onawo. Ngingathola nezaphulelo ekuphumeni okuthile (amahlengethwa, izikebhe, ukutshuza, njll ...)
4.57 · 63 okushiwo abanye
I-Anse à l'âne iyindawo yokudoba, uzothola ulwandle oluhle olugcwele izindawo zokudlela kanye nesizinda semikhumbi yempi. Kubathandi bamahhashi, ipulazi lokuhamba ngezinyawo liyimizuzu emi-5 ngemoto ukusuka endlini. Edolobhaneni, uzothola esitolo, ugwayi esitolo, ebhikawozi, igesi esiteshini, isikhumbuzo esitolo, kodwa futhi club diving, ukuhamba ukubona amahlengethwa, jet ski, uhambo kolwandle, futhi shuttles njalo usuku lonke ukuze travel eFort de I-France ne-Anse mitan (eduze nechopho lokuphela).
singakulanda esikhumulweni sezindiza ngokohlelo lwami ngoba ngiyisitolo sokudlela. (ama-euro angama-40 noma ama-euro angama-50 ngemuva kuka-8 pm).
Amakati ama-4 nezinja ezi-4 endaweni (konke kuyathandeka).
UElsa Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Les Trois ilets namaphethelo